Ayingalungiswa iNkandla - Mazibuko
Cape Town - UMengameli uJacob Zuma kumele akumise ukulungiswa kwendawo yaseNkandla, okuyindawo azalelwa kuyo, bese esebenzisa imali ukulungisa ezinye izinto ezonakele emiphakathini eseduse, kusho uMholi weDemocratic Alliance ePhalamende uLindiwe Mazibuko.
"Sengicele uMengameli uZuma ukuthi enze into efanele. Akulungile ukuthi aze alinde ukuzwa ngomvikeli womphakathi ukuthi amise uhlelo lolu," kusho uMazibuko ngesikhathi ekhuluma e-University of the Western Cape.
"Angakumisa ukulungiswa kwale ndawo, imali lena isetshenziswe ukulungisela imiphakathi engomakhelwane, kwakhiwe amathuba omsebenzi kanjalo nezingqalasizinda."
NgeSonto iDA icele uMvikeli woMphakathi uThuli Madonsela ukuthi aphenye ngemali engu-R203 million ekuthiwa izosetshenziswa ukulungisa indawo yaseNkandla.
UMazibuko uthe lokhu akwamukelekile njengoba isifundazwe iKwaZulu-Natal idinga imitholampilo, izibhedlela kuphinde kulungiswe izikole.
Uthe imali lena ingasetshenziswa ukwakha izindlu zomxhaso ezingu-3692.
"UMengameli uZuma usengakwazi ukuxolisa bese emisa ukwakhiwa kwalobu bukhazikhazi obuhlongozwayo.
linda.mthembu.18 - 2012-10-03 09:28
Bengingathanda ukubona amaqembu ezepolitiki esebenzisa ukukhethwa kwawo ukuba ayomela abantu lokho ekusebenzisa ngendlela yokubeka izidingo zabantu ngaphandle kokucwasa izindawo ezithile kodwa izindawo zonke bazithathe ngokufana.Kuyadabukisa ukuveza ukubona becwasa izindawo zasemakhaya kodwa uma befuna ukuvotelwa bagijima phambili sengathi bayazithanda, uma sekufanele zilethelwe intuthuko baqale ukuthi mazimiswe izinhlelo zakhona imali isetshenzislwe ukulungisela omakhelwane. zibuzeke ukuthi abanjani okufanele bathole intuthuko kangcono kunabanye,ngabe ngempela lababantu esibakhethile bayasithanda, noma basuke befuna ivoti lethu na? Iqembu leD.A. akwelichaze kabanzi ngalokhu elikushoyo.